ImiGangatho yokuchwetheza ekufuneka uyazi malunga noyilo loMzobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
ImiGangatho yokuchwetheza ekufuneka uyazi malunga noyilo loMzobo
UJorge Neira | | Imithombo, Iimpawu, Izibonelelo
Uyilo lwegraphic Kubaluleke kakhulu ukuba wazi amagama ahlukeneyo ochwetheza, kuba ukuphatha ulwimi olukhethekileyo kwenza umsebenzi ube lula kakhulu kwaye kunciphisa ixesha lokuchazwa kwento nganye ofuna ukuyenza, ukongeza ekunikezeleni umxholo ochanekileyo, ngegama elinye, kwisenzo okanye kwinkqubo.
Ndiyathetha xa usebenzisa amagama afanelekileyo kwaye ngakumbi kuyilo lwegraphic, leyo ungayibonisa into oyifunayo ngegama elinye. Ke ngoko, ukuba ungena kwihlabathi loyilo lwegraphic, kubalulekile ukuba uyazi imigaqo eyahlukeneyo yokuchwetheza eya kukunceda kulo lonke ikhondo lomsebenzi wakho.
Imigaqo eyahlukeneyo yokuchwetheza
Okokuqala, Siza kuthetha ngeefonti kunye nohlobo lohlobo. Enye yezinto omele uyazi kukuba uhlobo lochwethezo lubhekisa kuyilo oluthile okanye isitayile sonobumba ngamnye. Umzekelo, uhlobo lochwethezo Arial unesitayile esahluke mpela ECambria o I-Calibri. Kwelinye icala, xa sithetha ngamagama, emva koko sithetha ngobungakanani boonobumba ngamnye, umgama phakathi komnye nomnye wabo xa isicatshulwa senziwe ngomatshini wokubhala.
Enye yezinto ezinayo imithombo yile amatshe akekeleyo, umzekelo.
Kule mihla iikhonsepthi zitshintshile kwaye kuyilo inkcazo yolu hlobo lwezinto kulula kakhulu. Uyilo lwegraphic lwanamhlanje, typography ibhekisa kuyilo okanye indlela uhlobo lochwethezo olujongeka ngayoNgelixa uhlobo lochwethezi yile nto uyibonayo. Kwakhona, ifonti yinto esetyenziswayo, oko kukuthi, isimilo somzimba wohlobo lohlobo.
Abalinganiswa nabo elinye igama osele ulivile kwaye walisebenzisa kwaye kukuba abalinganiswa zonke iisimboli ezizodwa ezenza isicatshulwa, umzekelo, umzekelo, umlinganiswa unokuba ngunobumba, uphawu lweziphumlisi okanye amanani.
Kukho olunye uhlobo lomlinganiswa olubizwa ngokuba abanye oonobumba, ezibhekisa kuko konke ukwahluka komlinganiswa omnye. Ezi ntlobo zabalinganiswa zikwabizwa ngokuba glyphs Kwaye zihlala zisetyenziselwa ukuhombisa okanye ukongeza ukugxininisa. Inkqubo ye- serif Ikwayenye ikota ekufuneka uyazi kwaye leyo yimigca ethe tye ebekwe eziphelweni zoonobumba ngeenjongo zokuhombisa.
El ngokuchasene nale ngu san serif, Oonobumba abasisiseko abangenalo naluphi na uhlobo lomgca ekugqibeleni.
Umzekelo, sinokuqaqambisa ifayile ye- Ixesha elitsha lamaRoma, Ine-serif, ene Arial, engenayo. Kwelinye icala, Italic ligama elinokuthi mhlawumbi yazi kwaye uyazi ukuba ungayisebenzisa njani ukususela ebuntwaneni, kuba yenye yezona zinto zisetyenzisiweyo.
Akekeliswe apha utyekelo onaloakukho okanye iseti engaphezulu yeeleta kunye neenombolo. Kwindawo ye izithuba nokuma, kukho imigaqo ethile ekufuneka uyazi isiseko. Lo ngumgca wentelekelelo ekufanele ukuba ubhalwe kuwo onke amagama, amanani kunye neesimboli.
Kukho elinye igama elibizwa Umgca weKapa, ebhekisa kwi umgca ophezulu wentelekelelo obonisa umda woonobumba abakhulu nabancinci. I yokulandelela Ligama elisetyenzisiweyo ukubonisa indlela abasondelelene ngayo abalinganiswa kwisicatshulwa, oko kukuthi, babumbene okanye bahlulwe njani oonobumba okanye amanani oxwebhu.
El ukucacisa lelinye igama elibalulekileyo ekufuneka uyazi kwaye ibhekisa kumgama othe tye othe tyaba phakathi kwabalinganiswa ababini. Ngolu hlobo lomgama unika imvakalelo yoonobumba abafanayo okanye amanani, ukongeza ekudaleni isitayile esihle kwiliso lomntu. Ngoku imivumbo ngokubhala, sinokubonisa isiqu ebhekisa kumgca wokuqala owenziwe ngomlinganiswa xa ubhala ngesandla, ibonakaliswe kwisicatshulwa sekhompyuter.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » ImiGangatho yokuchwetheza ekufuneka uyazi malunga noyilo loMzobo
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokushicilelwa kwe-offset
Imibala ibalulekile xa isiza kuyilo